Kunyaradzwa kwevanhu vaMwari (1-11)
Inzwi murenje (3-5)
Ukuru hwaMwari (12-31)
Marudzi akaita sedonhwe remvura riri kubva mumugomo (15)
Mwari anogara pamusoro “pedenderedzwa renyika” (22)
Nyeredzi dzese dzinoshevedzwa nemazita (26)
Mwari haamboneti (28)
Vanotarisira kuna Jehovha vanowanazve simba (29-31)
40 “Nyaradzai, nyaradzai vanhu vangu,” anodaro Mwari wenyu.+ 2 “Taurai zvinobaya mwoyo weJerusarema,*Uye rizivisei kuti basa raro rekumanikidzwa rapera,Kuti mhosva yaro yaripwa.+ Rawana zvakanyatsoenzana nezvivi* zvaro zvese kubva muruoko rwaJehovha.”+ 3 Inzwi reari kushevedzera murenje riri kuti: “Vhurai* nzira yaJehovha!+ Gadzirirai Mwari wedu mugwagwa mukuru wakati twasu unopfuura nemugwenga.+ 4 Mapani ese ngaakwidziridzwe,Uye makomo ese nezvikomo zvese ngazvideredzwe. Nyika isina kuenzana inofanira kuti sandara,Uye nzvimbo isina kuenzana ngaive bani.+ 5 Kukudzwa kwaJehovha kucharatidzwa,+Uye vanhu vese vachazviona pamwe chete,+Nekuti muromo waJehovha wataura.” 6 Teerera! Pane munhu ari kuti: “Shevedzera!” Mumwe ari kubvunza kuti: “Ndoshevedzera kuti chii?” “Vanhu vese uswa hwakasvibirira. Kuvimbika kwavo kwese kwakaita* seruva remusango.+ 7 Uswa hwakasvibirira hunooma,Ruva rinooma,+Nekuti mweya wekufema* waJehovha unozvifuridza.+ Chokwadi vanhu vanongovawo uswa hwakasvibirira. 8 Uswa hwakasvibirira hunooma,Ruva rinooma,Asi shoko raMwari wedu rinogara nekusingaperi.”+ 9 Kwira mugomo refu,Iwe mukadzi ari kuunzira Ziyoni mashoko akanaka.+ Shevedzera nesimba,Iwe mukadzi ari kuunzira Jerusarema mashoko akanaka. Shevedzera, usatya. Zivisa maguta eJudha kuti: “Hoyu Mwari wenyu.”+ 10 Inzwai! Changamire Ishe Jehovha achauya nesimba,Uye ruoko rwake ruchamutongera.+ Inzwai! Mubayiro wake anawo,Uye mubhadharo waanopa uri pamberi pake.+ 11 Achachengeta* makwai ake sezvinoita mufudzi.+ Achaunganidza makwayana neruoko rwake,Uye achaatakura pachipfuva chake. Achatungamirira zvinyoronyoro aya anoyamwisa.+ 12 Ndiani akayera mvura muchanza cheruoko rwake,+Uye akayera denga nesipani yeruoko rwake?* Ndiani akaisa guruva renyika muchiyero+Kana kuti akayera makomo nechekuyeresaUye akayera zvikomo pachikero? 13 Ndiani akayera* mweya waJehovha,Uye ndiani angava chipangamazano wake anomurayiridza?+ 14 Ndiani waakabvunza kuti anzwisise,Kana kuti ndiani anomudzidzisa munzira yekururama,Kana kuti anomudzidzisa kuti awane ruzivo,Kana kumuratidza nzira yekunzwisisa kwechokwadi?+ 15 Inzwai! Marudzi akaita sedonhwe remvura riri kubva mumugomo,Uye anoonekwa setuguruva tushomanana turi pachikero.+ Onai! Iye anosimudza zvitsuwa seguruva rakatsetseka. 16 Kunyange Rebhanoni haikwani kuti moto urambe uchibvira,*Uye mhuka dzayo dzemusango hadzikwani kupa chibayiro chinopiswa. 17 Marudzi ese akaita sechinhu chisipo pamberi pake;+Anoaona sepasina, kunge asipo.+ 18 Mungaenzanisa Mwari naani?+ Chii chamungamufananidza nacho?+ 19 Mhizha inogadzira mufananidzo,*Mupfuri wesimbi anounama wese negoridhe,+Uye anogadzira cheni dzesirivha. 20 Anosarudza muti kuti uve mupiro wake,+Muti usingazoori. Anotsvaga mhizha ine unyanzviKuti igadzire mufananidzo wakavezwa usingazodonhi.+ 21 Hamuzivi here? Hamuna kunzwa here? Hamuna kuzviudzwa kubvira pakutanga here? Hamuna kunzwisisa kubva pauchapupu huripo kubvira pakaiswa nheyo dzenyika here?+ 22 Kune anogara pamusoro pedenderedzwa renyika,*+Uye vanogara mariri vakaita sehwiza. Ari kutatamura denga semucheka mutetetete,Uye anoritambanudza setende rekugara.+ 23 Anoita kuti makurukota asava chinhuUye anoita kuti vatongi venyika* vaite kunge vasipo. 24 Vachingobva kusimwa,Vachingobva kudyarwa,Hunde yavo painenge ichangotanga kudzika midzi muvhu,Vanofuridzwa nemhepo vooma,Uye mhepo inovapeperetsa semashanga.+ 25 “Mungandifananidza naani kuti ndinzi ndakaenzana naye?” anodaro iye Mutsvene. 26 “Simudzai maziso enyu mutarise kudenga. Ndiani akasika zvinhu izvi?+ Ndiye uya anobudisa uto razvo muuwandu hwazvo;Anozvishevedza zvese nemazita azvo.+ Nekuda kwesimba rake guru kwazvo uye simba rake rinoshamisa,+Hapana chimwe chete chazvo chinoshayikwa. 27 Unotaurireiko, haiwa iwe Jakobho, uye unotaurireiko, haiwa iwe Israeri kuti,‘Nzira yangu yakavanzika kuna Jehovha,Uye Mwari haaoni zvisina kururama zvandinoitirwa’?+ 28 Hauzivi here? Hauna kunzwa here? Jehovha, Musiki wemigumo yenyika, ndiMwari nekusingaperi.+ Haaneti kana kupera simba.+ Kunzwisisa kwake hakugoni kuongororwa.*+ 29 Anopa munhu akaneta simbaUye simba rizere kune vaya vasina simba.+ 30 Vakomana vachaneta uye vachapera simba,Uye majaya achagumburwa odonha, 31 Asi vaya vanotarisira kuna Jehovha vachawanazve simba. Vachabhururuka nemapapiro vachienda mudenga semakondo.+ Vachamhanya vasingaperi simba;Vachafamba vasinganeti.”+
^ Kana kuti “Taurai zvinonyaradza Jerusarema.”
^ Kana kuti “zvakapetwa kaviri pazvivi.”
^ Kana kuti “Gadzirai.”
^ Kana kuti “Rudo rwavo rwese rusingachinji rwakaita.”
^ Kana kuti “Achafudza.”
^ Upamhi hwechanza kana chakatambanudzwa, kubva panoperera chigunwe chikuru kusvika panoperera chigunwe chidiki. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akanzwisisa.”
^ Kana kuti “haina huni dzinokwana.”
^ Kana kuti “penyika yakaita bhora.”
^ Kana kuti “vanotonga nyaya panyika.”
^ Kana kuti “kunzwisiswa.”